#2 ဒီနေ့ဘယ်သူအလုပ်မလုပ်ချင်ကြတာလဲ? | Mycanvas
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်တစ်ခါတစ်ရံ Partners များနဲ့ စကားများရန်ဖြစ်ခြင်း၊ မတော်တဆအပျက်သဘောဆောင်သောအရာကဲ့သို့ ပြဿနာများနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ နောက်တစ်နေ့မှာအလုပ်မသွားချင်တာ၊ အလုပ်မလုပ်ချင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီအရာမျိုးဟာ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘဝမှာ တစ်ခါတစ်ရံကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အရာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုအခြေအနေတွေကို ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ပြီး အလုပ်ကိုလန်းလန်းဆန်းဆန်းဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲ? တနင်္လာနေ့ကနေဗုဒ္ဓဟူးနေ့ထိ သုံးရက်အတွင်းမှာ ဒီလိုပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ အကြံပြုချက် ၅ ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
(2) သင်ရှောင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အလုပ်တွေ (သို့မဟုတ်) ပုံမှန်ထက် ဦးစားပေးမဟုတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကြည့်ပါ ဥပမာ Laptop ထဲမှာ Save ထားတဲ့ Files တွေကိုစုစည်းခြင်း၊ မဖတ်ရသေးတဲ့ Email များစစ်ခြင်း၊ သင်လုပ်ဖို့လိုပေမယ့်မလုပ်ရသေးတဲ့အရာတွေကိုလုပ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာ ပထမအချက်နဲ့ကွဲပြားမှုမရှိဘူးလို့သင်ထင်နိုင်ပေမယ့်လည်း သင်စိတ်ဓါတ်ကျပြီး ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေတဲ့အခါ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းကိုနောက်ပြန်ဆုပ်သွားစေနိုင်တဲ့အတွက် အရေးယူလုပ်ဆောင်တာဟာအရေးကြီးတဲအရာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ဟာ စိတ်ဓါတ်ကျနေတဲ့အချိန်မှာ အလုပ်လုပ်အားကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ ခံနိုင်ရည်ကိုတိုးတက်စေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ် ကျွန်ုပ်တို့ အရမ်း Negative အတွေးတွေများတဲ့အခါမှာတော့ထိရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့လိုအချိန်မှာ ကိုယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံလောက်ကိုသာလုပ်ခြင်းက ပိုပြီးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။